🥇 ▷ NBA 2K horumariyayaashu waxay ka shaqeeyaan ciyaar tartan iyo adduun furan ✅
NBA 2K horumariyayaashu waxay ka shaqeeyaan ciyaar tartan iyo adduun furan
Intaa waxaa dheer in ay mas’uul ka tahay hanashada guusha NBA 2K oo iskaashi la yeelo gaarsiinta WWE 2K, Fikradaha Muuqaalka waxay leeyihiin mashaariic kale oo maskaxda lagu hayo si ay u ballaariyaan cirrkooda waxaana dhowaan la soo saaray macluumaad muujinaya waxa ka soo bixi kara daraasaddan.
Sida lagu sheegay warbixin Wccftech, isticmaale ‘ResetEra’ wuxuu ka helay shaqooyin banaan magaca Muuqaal Muuqaal ah oo uu tixraacayo macluumaadka ku saabsan cinwaanka cusub ee ay ka shaqeynayaan, kaasoo noqon doona orodka gawaarida adduunka furan. Dareenkaas, jagooyinka banaan waxay muujinayaan raadinta naqshadeeye heer kaasoo kaqeybgalaya “ciyaarta gawaarida gawaarida adduun furan” wuxuuna mas’uul ka noqon doonaa abuuritaanka ergooyin iyo munaasabado la xiriira xaaladaha gaarka ah ee muuqaal kasta.
Sidoo kale, Muuqaallada Muuqaalka ah waxay raadinayaan farshaxan 3D ah oo mas’uul ka ah hagaajinta waxyaabaha muuqaalka leh si ay u siiso taabasho dhab ah. Ugu dambeyntiina, daraasadda ayaa raadineysa inay leedahay qibrad u leh injineer softiweer ah oo mas’uul ka ah waxkasta oo ku lug leh makaanikada iyo fiisikada gawaarida.
Ilaa iyo hadda ma jiro macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mashruucan cusub, laakiin waxay umuuqataa in ka dib markay kaqaybqaadatay ciyaarihii kubbadda koleyga iyo tartamada, Muuqaalka Muuqaalka ayaa diyaar u ah inuu wax ka qabto noocyada kale ee cayaaraha.